Fanaintainana maha mendrika hoe?
"Tsy zavatra mety ho simba … no nanavotana anareo … fa ny ra soan’i Kristy, toy ny ran’ny zanak’ondry tsy misy kilema ary tsy misy pentimpentina. 1 Petera 1:18, 19 Fa Kristy koa aza efa nijaly indray mandeha noho ny ota, ny Marina hamonjy ny tsy marina, mba hitondra antsika ho amin’Andriamanitra." 1 Petera 3:18
Nisy fandinihana natao momba ny fanafoanana ny fanaintainana, milaza hoe iray amin’ireo antony tsy mamparisika ny marary hanaiky izany dia ny fiheverana fa «maha mendrika» ny fanaintainana. Dia mety ho ny fivavahana kristiana ve no nahatonga izany fomba fijery izany? Misy mihevitra izany.
Tsia, tsy maha mendrika antsika tsy akory ireo fijaliantsika. Na mafy toa inona aza izy ireny, ary ekena hozakaina am-paharetana, dia tsy mahonitra ny fahotantsika na iray aza. Ny fijaliana niaretan’i Jesosy teo amin’ny hazofijaliana nandritra ireo ora telo maizina no hany mahafafa ny fahotana. Tamin’izay no nanefany ny sandan’ny fanavotana antsika. Tamin’io fotoana io Izy no niaritra ny fahatezeran’Andriamanitra sy ny fandaozany, izay tokony ho nihatra mandrakizay tamintsika.
Nandritra ny fiainany manontolo dia nijaly Jesosy, niharan’ny tsy rariny. Ny fomba niaretany ny zava-drehetra dia nampiharihary ny halavorariny ara-toe-panahy. Tamin’ny fotoana nanaovan’i Jesosy sorona ny tenany no nanaporofoany fa Izy tokoa no Ilay Zanak’ondry tsy misy kilema ary tsy misy pentimpentina, ka ny rany nalatsaka teo amin’ny hazofijaliana no hanavotana izay rehetra matoky Azy (1 Petera 1:18,19).
Na toy inona fijaliantsika, fahoriana, fandavantena, dia tsy azo oharina amin’ny fijaliana niaretan’i Kristy avy tamin’Andriamanitra, ho fanonerana ny fahotantsika. Ny sorona nataon’i Kristy no hany manonitra ny fahadisoana, ho an’ny olona mametraka ny tokiny aminy. Fa ny valin’ny fiantorahana amin’Andriamanitra kosa, rehefa mijaly, dia fahatoniana satria mahatsapa ny famonjeny.